Sida loo Edit Video in Windows Media Player
Waxaan helay fog sida dhab ahaan loading aan video camera ka digital gal computer ka iyo folder ah. Hadda waxaan u baahan tahay si ay u saxaa asagoo adeegsanaya Windows Media Player. Waxaan doonayaa in aan saamaynta gaar ah sida kala guurka iyo credits, laakiin ma garanayaan waxay sameeyaan. Waxaan asal ahaan ku gartaan si loo ciyaaro clips ee Windows Media Player, laakiin taas kaliya waxa ay ku saabsan. Step by tilmaamaha tallaabo noqon mid aad waxtar doonaa. Thanks .--- Jackie
Haddii aad sidoo kale u baahan tahay inaad wax ka bedel videos aad la Windows Media Player sida Jackie, inay meel sax ah aad u yimid. Inkastoo Windows Media Player laftiisa ku iman mayso feature tafatirka kasta, waxaad yeelan doontaa in ay wax ka bedel videos in Windows Media Player istareexsan oo leh fur-in smart loo yaqaan SolveigMM WMP Trimmer plugin . Fadlan tixraac Qeybta 1 Wixii macluumaad dheeraad ah.
Haddii aadan rabin inaad si loo soo dajiyo kasta oo ka siib-in aad Windows Media Player laakiin ay hareerahooda fiiriyeen u editor a movie awood badan, halkan waxa aad ku talin kale 2 tifaftirayaasha filim awood badan.
Qeybta 1: Edit videos in Windows by rakibidda SolveignMM WMP Trimmer plugin
Qeybta 2: Edit videos in Windows isticmaalaya All-in-One Video Editor
Qeybta 3: Edit videos in Windows isticmaalaya Filmora Wondershare ah (markii hore Wondershare Video Editor)
SolveigMM WMP Trimmer plugin waa aalad fur-in in aad awood u ah si loo badbaadiyo a goosin movie ugu jecel yahay, qayb music ama wax ka bedel soo baxay goobaha aan loo baahnayn in uu ku raran yihiin gal Windows Media Player ah. Sidaa daraadeed, aad uga takhalusi karo qayb ka mid aan loo baahnayn ka webinars aad, ka muujinaya TV saarto xayeysiis, la abuuro ringtones aad iPhone iyo iwm Waxa kale oo ay taageertaa AVI, wmv, ASF, regelingen, WMA, MP3, MPEG-2, MPEG- 1 iyo iwm
Videos Edit in Windows Media Player tallaabo tallaabo-:
Download SolveigMM WMP Trimmer iyo rakibi fur-in ku saabsan nidaamka.
Riix T furidda shayga ugu muhiimsan ee ools> koronto-tago> SolveigMM WMP Trimmer plugin . Waxa uu u suurtogelin doonaa fur-in ee Windows Media Player.
Play file aad rabto in aad wax ka bedel iyo dhaqaaqo slider buluuga ah qaybta ka ah filimka aad rabto in aad badbaadin, ku dhacay oo ku Start button. Haddii aad rabto in aad beddesho markii bilowga, aad gacanta ku qor karaa qiimaha waqtiga galay Start sanduuqa. Marka ay timaado in ay dejinta waqtiga stop ah, riix End button.
Saxaafadda In button in jar bareeg ee la doortay ama Out si ay u dhinto bareeg ka soo file il warbaahinta. Intaa ka dib, aad magaca kartaa file filimka saxar ah oo u badbaadin.
1. Habka falinjeeerka la socon doonaa bar horumar ah oo la tirtiri karaa wakhti kasta. Marka nidaamka falinjeeerka waxaa loo sameeyaa, waxaad heli doontaa suuqa kala pop-up in kuu tilmaami doona folder saarka halkaas oo files badbadeley ma uu badbaadeen ah.
2. Tani waxay ka siib-in u Windows Media Player keliya oo ay siisaa function goo. Haddii aad rabto in aad noola qataarrada madow, shaandheyn 90 degrees si ay u caadi ah ama ka codsan kala guurka oo u dhexeeya video clips kala duwan ama iwm; fadlan hubi xal kale ee Qaybta 2.
Wondershare Video Converter Ultimate Waa powerfull ah All-in-Mid ka mid ah software video xal. Waxaa xallin karo dhibaatooyinka video la xidhiidha si hufan, sida tafatirka, diinta, duuban, qoraalana, DVD gubanaya, hoorto, iwm Gaar ahaan, waxa ay u taageeraan diinta ka mid ah in ka badan 150 qaabab jiraan 4K / 3D, hawlaha ka badan hoos ku qoran:
Technology APEXTRANS badasha files 30x ka dhaqso badan waxyaabaha la tartamayay.
Download videos ka goobaha la wadaago 1000+ video la One Click!
Si fudud u qoraan hoorto online videos.
Bedelka Video aan Cable USB.
Si aad xaalkaa videos ee kombiyuutar Windows-ku salaysan, Wondershare ka Video Editor ka yimaado sida editor ah anfacaya video in hayaa labadaba aad video asalka iyo tayada audio dhawrsan. Editor video waxaa sidoo kale si buuxda u-ka buuxaan noocyo kala duwan oo ka mid ah qaababka waxtar leh:
Fursadaha Fine-habayn si kor videos ku qasabno.
Ku dar qalabka tafatirka guud sida beddesha, Split, Dalag, ku milmaan iyo iwm
Samee video ah Picture-in-Picture si fudud oo dhaqso.
Xakamee xawaaraha video iyo maqal ah.
Codka u xiiso beddel.
Ku dar horyaal oo aamusnaan ah la saamaynta text dhisay-in.
La wadaag saarka gal YouTube ama badalo si qaabab aad jeceshahay iyo qalabka.
Guba wax soo saarka gal DVD ah disc, folder ama sida file ISO image.
Hoos ku lifaaqan shaashada ee editor video ah, fadlan hubi hagaha wixii faahfaahin dheeraad ah .
Download version maxkamad ay xaq halkan (Mac / Windows 8 taageeray).
20 canabka Pro Talooyin aad ka ogaato
> Resource > Video > Sida loo Edit Videos in Windows Media Player